NOOCYADA GOJI GOJI LEH SAWIRO IYO SHARRAXAAD - SOOSAARKA DALAGGA
Maxay yihiin noocyada dhogorta goji
Thanks to helitaanka caafiimaadka, berry goji waxay heleen caan aad u ballaaran oo adduunka casriga ah. Waxay leeyihiin midab khafiif ah oo casaan ah oo yarna u egtahay sabiibta. Dhaqdhaqaaqooda macaan-macaan ee gaarka ah looma jeclaanayo qof walba, laakiin dadka isku dayay inay soo saaraan waxyaabahan xiisaha leh waxay xusuusinayaan kala duwanaanta dhadhanka kala duwan. Waxay u muuqataa in mid ka mid ah geedaha Shiineesku uu dhadhamo sida isku dar ah abrikotka iyo sabiibta kale, kuwa kale ee raspberries, iyo weli dadka kale waxay yiraahdaan waxay isku dayayaan habeenkii.
Si aad u fahamto sida saxda ah ee miraha ay ku habboon tahay inaad iibsato ama koraan, maqaalkani wuxuu bixiyaa guudmar ku saabsan noocyada caanka ah ee berry goji.
Wax yar oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee goji berry
Berry Tibetan waa cajiib leh maxaa yeelay waxay ku jiraan qiyaastii laba ashyood oo qiimo leh, qadar fara badan oo fiitamiino ah, mareellooyin iyo antioxidants, waxaana jira carotiin badan oo ka badan iyaga oo dabacasaha ku hodan.
Meelaha aan faa'iido yar laheyn waa nooca berry sida: miro yar, qoryo, blueberry, blueberry, honeysuckle, raspberry madow.
Asaasida dufanka muhiimka ah ee badeecada, oo ay ku jiraan linoleic acid, waxay gacan ka geystaan ​​bilowga habboon ee dheef-shiid kiimikaadka iyo gubitaanka degdega ah ee dufanka xad-dhaafka ah. Intaa waxaa dheer, waxay:
caawimaad ka qaadashada niyad jabka;
hagaajinta xaaladda xaalada;
dejiyaan nidaamka dareenka;
dib u soo kabashada jirka.
Waa muhiim! Waqtigeennii, marka berry mucjiso ah ayaa si gaar ah caan u noqday, nasiib daro, suurtogalnimada in been abuur ah si aad ah u kordhay. Sidaa darteed, waa inaad isticmaashaa adeegyada alaab-bixiyeyaasha la xaqiijiyey oo keliya. Intaa ka sokow, xitaa haddii aad koray goji ee dooxada guriga, kama hadli kartid wax kasta oo faa'iido leh, maaddaama aad ka heli karto dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah oo kaliya cunista miraha si taxadar leh u koray meelaha sare ee gobolka Ningxia.
Noocyada caanka ah
Maanta, noocyada goji berry ayaa u muuqda mid kala duwan, sababtoo ah dhawaanahan cidna kama ogaanin iyaga dhammaan gobolada. Waa mid xiiso leh in xayndaab iyo miraha noocyo kala duwan ay aad uga duwan yihiin midba midka kale, markaa dareenkaaga ayaa lagu martiqaaday liiska kuwa ugu caansan.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay mid ka mid ah halyeeyada ku saabsan badeecadani, goji waa magaca ugu da'da yar ee qabiilka Tibetan, oo dadka degaanka ay u koraan miro caan ah si ay u helaan dhimasho la'aan.
"New Big" ("New Big")
Goji kala duwan "New Big" waxaa lagu xayiray midabeeyaha Polish. Burooyinka quruxda badan leh ayaa kori kara ilaa 3.5 mitir ee dhererka. Wuxuu si sahlan u dejin karaa jihada koritaanka wuxuuna u kori karaa liana lignified, haddii ay si fiican ugu xiran yihiin taageerada. Warshadu waxay marisaa miro horeba sanadka ugu horeeya ee beerto, waxay leedahay tamar korodhsan oo awood leh waxayna awood u leedahay inay ku darto macnaha guud mitir dhan xilli ciyaareedka koowaad. Mucaaradka caabbinta ee barafkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku korto waddada dhexe, halkaasoo ay u dulqaadanayso xitaa dhaxan 30-degree. Midhaha ugu horreeya ee bislaaday caadi ahaan waxay u muuqdaan bilawga (iyo ilaa bartamaha) bisha Agoosto, iyo xilliga ah Bisaylkiisa ballaaran wuxuu dhacaa lixda usbuuc ee soo socda. Miisaanka dhirta macaan iyo dhanaan waa 1.2 grams oo kaliya.
Intaa waxaa dheer in xaqiiqda ah in kala duwan ay leedahay guryaha faa'iidooyinka gaarka ah, New Big waxaa loo tixgeliyaa in ay noqdaan geedo aan qabyo ahayn. Goobta dabiiciga ah, waxay ku koraan dhinacyada caadiga ah, oo cidina ma daryeesho, sidaa daraadeed waxaad ku beeri kartaa meel kasta oo beerta ah - waxa ugu muhiimsan waa in aan la dhaafin.
Asalka magaca magaca noocyada kala duwan ee "goji Chinese" ayaa si toos ah ula xiriira waddankooda bariga ah. Reerka Ruushku waxay muddo dheer barteen sidii ay si wanaagsan ugu kori lahaayeen dalkeenna. Waxaa si weyn kor ugu kaca dooxooyinka Mongolian, Himalayada iyo Shiinaha waxayna si firfircoon u buuxinayaan bogsiin, miro kulul. Sida caadiga ah duurka semi-khafiif ah wuxuu gaari karaa dhererka qiyaastii laba mitir, iyo geedkan wuxuu karti u yeelan karaa midho kasta xaalad kasta. Adkeysiga noocyada cudurrada iyo cayayaanka oo dhan, waxay sidoo kale adkeysaa dhirta xooggan. Sida caadiga ah, ee pollen ugu fiican, waxay ku beeraan laba duurka wada, iyo si ay u si ay u koraan si firfircoon, waxaa lagu meeleeyay barxad leh iyo carrada saboolka ah.
Darajada "Lhasa" waa sheyga xulashada Shiinaha. Its baadiyaha u kacaya ilaa 3 mitir oo uu leeyahay laamood oo dheer dusha sare, kuwaas oo la daboolay guntimaha yaryar. Ka dib markii la beero, bilowga fruiting wuxuu loola jeedaa xilliga labaad, iyo dhalidda hal bush oo kala duwan wuxuu u dhexeeyaa 3.5 illaa 4 kg. Waxay leedahay ubaxyo iskiis u samaysan, oo ka dibna ka samaysan miraha waaweyn ee qoyan. Miisaanka, marka la barbardhigo noocyo kale, waa weyn oo ku filan - 2-3 garaam oo dherer ah - 2 cm, iyo qaabka uu yahay qulub-ovoid. Cuntada alaabtu waa mid aad u dhadhan fiican leh, dhadhan macaan leh oo qadhaadh leh. Faa'iidada noocan ahi waa dillaacaa ka hor inta aan la gaarin noocyada kale, iyo nacnacyada qulqulaya waxay ku deldeli karaan duurka si aad u qabow. Abaarta u adkaysata oo u adkaysa dhaxan daran (-26 ° C). Waxaa lagu talinayaa in ay koraan duurka u dhow taageero kasta oo isku xir dhirta miraha. Goobta waxaa ka wanaagsan in la doorto carrada si fiican loo miiro, iyadoo loo fiiriyo iftiinka qoraxda.
"Shirkadda sonkorta leh"
Kala duwanaanta "Sugar wayn" waxay magaceeda u bixisay sabab ah, sababtoo ah miro yar oo baadiyaha ah ee ku yaal aaggeenna ayaa gaari kara cabbirka dhejiska, inkastoo miisaanka caadiga ah yahay - 1.2 garaam. Qoollada qaangaarka ah ee awoodda u leh inay kor u kacaan ilaa 3.5 mitir, faafitaanka kala duwan iyo samaynta dalagyo badan oo miro ah. Munaasabada caleenta dabiiciga ah ee dhaadheer ayaa leh tilmaam tayo sare leh, sidaa darteed, iyaga oo isku dayay mar, ma sii maleyn doontaa nooca goji waa mid aad u adag. Badeecada sida caadiga ah ee bilaha 8aad-9aad. Meelaha leh jawi dabiici ah oo dheellitiran, abuurista ayaa laga yaabaa inay bilaabato bisha Oktoobar. In kastoo xaaladaha cimilada, "Shirkada sonkorta leh" waxay leedahay dhalid sare: laga soo bilaabo geed bukaanka ah ayaa ka saari kara baaldiyada miro. Intaa waxaa dheer, waxaa si gebi ahaanba aan kala sooc lahayn dhaxan daran, laanaheeda ma barafoobin xitaa at -30 ° C. Dhirta Tibetan, sida loo yaqaan, waxay awoodaa in ay ku noolaato xitaa marar daran oo aad u daran, laakiin kiiskan waxaa loo baahan yahay in lagu daboolo wax.
Marka laga soo tago shabeelwood, qoysaska Paslenov waxa kale oo ka mid ah: Brugmans, cawska cawska, tubaakada kookaha, petunia, iyo Physalis.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee kala duwan ee "Sweet Amber" waa content ugu sarreeya ee fitamiin C iyo malab, oo ah soodhadh aad u qaas ah oo miro ah. Waxaa la naqshadeeyay tarbiilayaasha Shiinaha ee sannadka 2016, laakiin, inkastoo ay soo dhaweynayaan, ayaa durbadiiba ku guuleystey inay ku guuleystaan ​​booska ugu horreeya ee doorbididda beeraleyda. Qoryaha noocyada noocan ahi waxay leeyihiin qaab dhisme ah mana ku dhegsanaan taageerooyinka, laakiin waxay ku tiirsan yihiin iyaga. Dhererkoodu wuxuu gaadhi karaa 2,5 mitir, hal sano oo dhakhso ah oo ku filan (qiyaastii mitir) ayaa kor u kacda. Rooting berry si tartiib ah u noqdaan kuwo hufan, ku shub hilibka huruud ah diiran. Waxay caadi ahaan u muuqdaan sanadka labaad ama sadexaad kadib beerashada, ubaxuna wuxuu dhacaa inta badan Juun-Agoosto (xilliga saxda ah wuxuu ku xiran yahay aagga cimilada). Cunto kala duwan oo ah "Amber Sweet" ayaa si fiican u dulqaadanaysa kuleylaha qaboobaha, laakiin waxay jeceshahay in ay ku adkaato dhul-cadceedda furan.
Tibet iyo Himalayas waxaa loo tixgeliyaa inay tahay goobta lagu qurxiyo ee quruxda badan "geedka", laakiin si sahlan ayey u kori kartaa aagahayaga. Waxaa fiican in lagu beero warshad meel wanaagsan oo iftiin leh, maadaama ay tahay mid aad u qorraxsan. Cabbitaanka lushadu badanaa wuxuu gaaraa dhererka 2-3 mitir waxana uu leeyahay midab casaan ama midab cas. Bush badanaa wuxuu kala jajabay saddex sano ka dib markii la beero.
Ma taqaanaa? Qeybta Shiinaha (magac kale oo goji), taas oo dhammaanba jecel yihiin, waxay keeni karaan waxyeelo. Midabkan noocan oo kale ah sida miraha barberry-sida aad u weyn ayey u sumoobi kartaa haddii qofku cuno cayriin.
Qaababka beeritaanka iyo daryeelka ee berry
Si aad u korto nooca caanaha nafaqo ee caanka ah ee xaaladaha hantidaada, uma baahnid inaad is adkeysid, sababtoo ah warshadan:
aad u furfuran;
ma helin khaladka ay ka kooban tahay ciidda;
soo saarka, asal ahaan, iyo sidoo kale kuwa kale, by abuurka iyo gooyn.
Seeds lagu beeray sanduuqyo khaas ah oo khafiif ah oo la rusheeyey dhulka, taas oo mar walba waa in lagu hayaa qoyaan ka hor biqilka. Laakiin iftiinka, ka hor caleemaha ugu horeeya, iyaga oo aan loo baahan yahay. Ka dib markii biqilka, ka hor, sanduuqa waxaa la dhigayaa halka nalalka iftiinka ka fiican yahay, iyo heerkulka hawada waxaa lagu hayaa 10 ilaa 20 ° C.
Ku fadhiisashada goji meel joogto ah waa in la marsiiyaa marka caleemaha kowaad ay horey u muuqdaan duurka. Tani, dalool waa la qoday, kaas oo ah in laga buuxiyo ciidda bacrin ah oo ay la socoto digada beeraha iyo meesha Bacriminta potash-fosfooraska lagu daro rabitaanka, si loo hagaajiyo fiicnaanta dhirta.
Daryeelka waxaa ka mid ah wax-qabadka heerka:
Waa muhiim! Laga soo bilaabo qadhaadh aan fiicnayn ayaa yarayn doona midhaha, tan ugu sarreysa, waraabinta wakhtiga geedka (iyo daryeelka dabcan, dabcan).
Horumarka ee wolfwood Shiineeyska ah ma keeno oo kaliya raaxo, laakiin sidoo kale faa'iido weyn, maadaama ay ka caawisaa ilaalinta caafimaadka aadanaha oo aad naftaada ku ilaaliso qaab weyn. Sidaa darteed, hubi inaad u fiirsato noocyada kala duwan ee berry goji, in ay noocyo shakhsi ah oo si taxadar leh u akhri sharaxaad faahfaahsan.
Waa maxay sababta ukunta digaaga ay uusku duubantahay?
Sida loo keydiyo kaabajka xilliga jiilaalka
Barashada si aad u kariso warshad aad u badan: inta le'eg ee lagu kariyo hadhuudhkii hore si ay u noqoto mid jilicsan oo casiir leh?
Waa maxay sababta qolofta ukunta ee midabada kala duwan
Tiknoolojiga beeraha ee beerista basbaaska "Claudio F1": faa'iidooyinka iyo sifooyinka kala duwan ee noocyada kala duwan
Noocyo cusub oo cufan
Leek sii kordhaya
Mulberry sii kordhaya
Faafinta by gooyn
Maanta waxaan ka hadlaynaa clematis sii kordhaya ee Siberia. Qeybo badan oo ka mid ah ubaxyadu waxay yaqaanaan warshadkan, laakiin qaar badan ayaa aaminsan in geedku jecel yahay jawi diirran oo aan caadi aheyn oo uusan ku korin waddooyinka waqooyiga. Waxaan caddeyn doonnaa kuwa ka soo horjeeda, dooro noocyada ugu haboon ee kugula socodsiiya shuruucda daryeelka. Noocyada Clematis ee Siberia Noocyada dabiiciga ah ee clematis yihiin kuwo aan ku habboonayn beerto ee Siberia, sidaas oo noocyo ah in ay adkeyn karaan heerkulka aad u kulul iyo qabow yihiin bred ee USSR. Read More
Sidee loo daweeyaa idaha iyo riyaha laga bilaabo furuqa
Sida loo xiro ubucda cas ee casaanka ee jiilaalka